Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Baro iswiidhish / La jirka kuwa kale ku tababaro swiidhishka
Degmooyin iyo ururo tabaruc ah oo badan waxay ka shaqeeyaan inay caawiyaan qaxoontiga dalka ku cusb iyo ajnabiga inay xiriir la sameeyaan Iswiidhishka. Magaca hawshu way kala duwanaan kartaa, waxaa lagu magacaabi karaa saaxiib luqada ah, hagaha qaxoontiga, caawiyaha qofka cusub, la taliye ama saaxiib.
Adigoo maraya hagahaaga qaxootiga ama saaxiibkaaga luqadda ayaad si degdeg ah u baran kartaa swiidhishka, xiriirra cusub oo nolol maalmeedka kuu fududeyn karana waad xir-xiraneysaa. Degmadaada ayaad u sheegeysaa in aad daneyneysid in aad heshid saaxiib luqadeed ama hage qaxooti.
Si loo helo hawlaha meesha aad ku nooshahay ka raadi bogga intarnatka ee degmadaada ama jedwalka hawlaha.